Noma iyiphi indawo yokuzivikela ngumvikeli womuntu siqu noma into okumelwe igcinwe imfihlo futhi imfihlo. Izinqaba eziningi ziqashwe amafulethi ethu kanye namagaraji, ama-cottages namahhovisi. Izitolo kanye nezikhungo, amakhabhinethi nezokuphepha, amatafula kanye namaswidi afanayo nezinhlobo zazo zokukhiya ezahlukene. Omunye walaba balindi kukhona ukukhiya ikhodi. Vula ukukhiya inhlanganisela ngaphandle kokwazi ikhodi (izinombolo) kuyinkinga enkulu, futhi ngezinye izikhathi akunakwenzeka nakanjani. Ukuhlanganiswa kwamakhodi kuphelele kuze kube yizinkulungwane ezihlukahlukene eziyizinkulungwane ezihlukahlukene futhi ngokuhamba kwesikhathi ukwanda kuphela.
Ungavulwa kanjani ukukhiya inhlanganisela uma ngokungazelelwe ukhohlwe ikhodi? Kunezindlela eziningi zokuvula nokweqa. Yiqiniso, uma unesi-Bulgarian noma i-hacksaw, isikebhe esibukezayo noma umshini wokugqoka, isando noma enye ithuluzi, ungazama ukuphula, ukusika nokubulala "ukukhiya. Kodwa ukuphuka - hhayi ukwakha, futhi ukukhiya inhlanganisela akuyona imishini, futhi kuyoba nesihawu kakhulu uma isimangaliso esihlangene sizobhujiswa ngesihluku. Lapha, empeleni, unquma, futhi zonke izindlela zilungile ekufinyeleleni imigomo. Ungazama ubunjiniyela kagesi kule ndawo, lawa ama-lasers akhethekile no-X-rays, ama-wiretaps futhi afanelana. Futhi uma kukhona akusekho imishini ekhethekile ye-elekthronikhi nezinye izinto zokusebenza, kodwa nje kudingeka uvule ukukhiya inhlanganisela bese ungena ngaphakathi kwebhokisi noma uphephile njengamanje? Lapha kubalulekile ukulinda kancane. Ukwenza lokhu, uzodinga ukubiza inkampani ekhethekile ukuvula okuphuthumayo kokukhiya kwanoma yisiphi isinkimbinkimbi. Futhi ngokushesha maduzane iqembu labachwepheshe lizofika, "ama-bear cubs", okungakapheli amaminithi amahlanu azovula noma iyiphi indlela yokukhiya ikhodi. Yebo, ukuvula ilokhi ngokwakho, udinga ulwazi olukhethekile, okuyinto esikhathini esizayo okumelwe lisetshenziswe kuphela ezimweni zomthetho futhi akukho nhlobo ongawahlukumezi ngezinhloso ze-mercenary.
Cabangela isibonelo esilula kakhulu sokuvula isikhwama sempahla yokukhiya ikhodi noma i-suitcase. Isibonelo, uhamba ngesitimela, futhi ikhanda lakho lihlukumezeka futhi alikwazi ukukhumbula ikhodi ekhonjiwe yokukhiya ikhodi ehlungiwe ... Nansi imilayezo yokuvula ukukhiya inhlanganisela ku-suitcase, noma ngabe ukuphi. Ngokuvamile ikhodi yokukhiya ku-sutukisi iyona elula futhi iqukethe amasondo amathathu, ngalinye linamanani ukusuka ku-0 kuya ku-9. Le nhlanganisela yokukhiya inezinketho ezingafinyelela ku-1000 kuphela zokuvula. Ngikholelwa, lokhu kuncane kakhulu, futhi kungenzeka ukuvula ilokhi ngokukhetha izibalo ezinemizuzu engu-15-20.
Sifaka onke amasondo amathathu endaweni 0 futhi siqala ukukhipha ukukhiya okungalaleli. Amasondo amabili okuqala ngakwesobunxele ashiywe ku-0, kanti owesithathu uqala ukupheqa ku-oda ukusuka ku-0-1-2 ... nokunye kuya ku-9. Ngesikhathi esifanayo, uma ukukhiya kungaphakathi, vinisa isembozo se-suitcase ukuze uzizwe uthanda ukuchofoza idijithi ngayinye ngenkathi upheqa isondo. Uma ilokhi ingaphandle, bese udonsa umnsalo wekhikhi uqobo, futhi ukuzwa ukuchofoza bese uzizwa ukupheqa. Sishintsha isondo lesithathu, simise edijitini ngalinye futhi sibambe ukukhiya esimweni esiqinile. Uma lokhu kunganikezi imiphumela emihle, bese senza ukuhamba okulandelayo. I-kwesokunxele sokuqala kwesondo ishiywe kudijithi engu-0, ephakathi, iyesibili, siyihumusha ku-1, futhi okwesithathu iphinda iqale ukusuka ku-0 kuya ku-9 bese uzama ukukhetha ikhodi ekhohliwe. Uma kungekho mphumela, bese uqhubeka ngokulandelana okufanayo. Isondo lokuqala lingu-0, isondo elivamile lihlelwe ku-2, isondo lesithathu likhethiwe. Uma isondo eliphakathi lihamba ngezinombolo ezingu-9 futhi ilokhi ayivuli, iya esiteji esilandelayo. Isondo lokuqala lihlelwe ku-1 iyunithi, isilinganiso esivela ku-0, isondo lesithathu lisolwe kusuka ku-0 kuya ku-9, ungakhohlwa ukudonsa okhiye bese ulalele. Izinketho eziqhubekayo zinamalungiselelo alandelayo:
Okokuqala - 1, owesibili - 0, okwesithathu sithinta;
Iyokuqala - 1, yesibili - 1, yesithathu sithinta;
Iyokuqala - 1, yesibili - 2, yesithathu sithinta;
Iyokuqala - 1, yesibili - 3, yesithathu sithinta;
Iyokuqala - 1, yesibili - 4, yesithathu sithinta;
Okwokuqala - owokuqala, owesibili - wesihlanu, wesithathu siphila;
Iyokuqala - 1, yesibili - 6, yesithathu sithinta;
Iyokuqala - 1, yesibili - 7, yesithathu siphila;
Iyokuqala - 1, yesibili - 8, yesithathu siphila;
Iyokuqala - 1, yesibili - 9, yesithathu sithinta.
Uma ilokhi ingacindezeli futhi ivule futhi, siyaqhubeka ukukhetha:
Okwesibili - wesibili, owesibili - owesibili, wesithathu siphila;
I-2 - yesibili, yesibili - 1, yesithathu sithinta;
Okwesibili, owesibili - wesibili, wesithathu siphila;
Eyokuqala - yesibili, yesibili - yesithathu, yesithathu sithinta;
I-2 - yesibili, yesibili - 4, yesithathu sithinta;
Okwesibili - wesibili, owesibili - wesihlanu, wesithathu sithinta;
I-2 - yesibili, yesibili - 6, yesithathu sithinta;
Okwesibili - wesibili, owesibili - wesi-7, wesithathu siphila;
Okwesibili - wesibili, owesibili - 8, wesithathu siphila;
I-2 - yesibili, yesibili-9, yesithathu sithinta.
Futhi njalo, kuze kube sekugcineni ikhodi yokuvala isenza sijabule ngokuchofoza kwethu okulinde isikhathi eside. Uvuzwa ngokubekezela nokuzikhandla kwakho! Njengomunye umuntu omkhulu wathi: "Funda, funda futhi ufunde." Futhi umsunguli nomhlanganisi u-Ostap Bender wanezela kulo mbono: "Maduzane amakati kuphela azozalwa."
I-mink ye-shearing - indlela yokuhlukanisa ubuchopho bokuqala kusuka ku-fake?
Umkhakha humidifier: Uhlolojikelele, izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Ukunakekela zomvini entwasahlobo nasehlobo: izincomo main
Positioner ukulala: Izinzuzo